Adeegyada La-tashiga - Shang Hai Tongke Flow Technology Co., Ltd.
La talinta TKFLO ee guushaada
TKFLO waxay diyaar u tahay inay macaamiisheeda kala timaado dhammaan su'aalaha la xiriira bambooyin, filtarka iyo adeegga. Laga soo bilaabo talobixinta ku saabsan xulashada alaabta saxda ah ee baahiyahaaga ilaa bambooyin kala duwan iyo xulashada waalka.
Waxaan kuu joognaa adiga - maahan oo keliya markay tahay xulashada sheyga cusub ee saxda ah, laakiin sidoo kale inta lagu jiro dhammaan wareegga nolosha ee bambooyin iyo nidaamyadaada. wo qalabka dayactirka, talo bixinta dayactirka ama dib u habeynta, iyo dayactirka keydinta tamarta ee mashruuca.
Adeegga la-talinta farsamada ee TKFLO waxay siisaa xalal shaqsiyeed si loo hubiyo hawlgalka ugu fiican ee bambooyin, filtarka iyo qalabka kale ee wareega. Markaad sidaas samaynayso, TKFLO waxay had iyo jeer eegtaa nidaamka guud ahaan. Saddexda ujeedadood ee ugu waaweyn: in la hagaajiyo iyo / ama la tayeeyo nidaamyada la jaanqaadaya xaaladaha isbedelaya, si loo gaadho keydinta tamarta iyo in la kordhiyo nolosha adeegga ee qalabka wareegaya oo dhan.
Iyadoo la tixgelinayo nidaamka guud ahaan, injineerada TKFLO waxay had iyo jeer ku dadaalaan inay helaan xalka ugu dhaqaale. Laga soo bilaabo dayactirka ilaa isticmaalka qalabka sida gaarka ah loo soo saaray, dib u habeynta nidaamyada xawaaraha isbeddelka ama beddelaadda mashiinka, waxaan la shaqeyneynaa macaamilka si aan u horumarinno xalka shaqsiyadeed. Waxay aqoonsadaan habka ugu wanaagsan ee loola jaanqaadi karo nidaamyada xaaladaha isbeddelaya, ha ahaato aagga farsamada ama isbeddelada sharciga.
La talinta farsamada: ku tiirsanaanta khibrada iyo aqoonta
Adeegga la talinta farsamada ee TKFLO ee bambooyin iyo aaladaha kale ee wareega ayaa leh saddex hadaf:
A. Nidaamaynta nidaamka
B. Keydinta tamarta
C. Nolol adeeg dheeri ah oo ah qalabka wareega ee wax kasta oo la sameeyo
1. Si loo hubiyo la-talinta macaamiisha ee ugu habboon, khubarada adeegga TKFLO waxay ku saleeyaan aqoonta-sida ay u leeyihiin dhammaan waaxyaha takhasuska u leh TKFLO, laga bilaabo injineernimada illaa soo-saarista.
2. Isku hagaajinta xawaaraha si loo gaaro xakamaynta mashiinka ugu habboon ee shuruudaha nidaamka kala duwan
3. Wax ka beddelka nidaamka Haydarooliga, tusaale ahaan, iyadoo lagu dhejinayo qalab cusub iyo kuwa fidiya
4. Adeegsiga qalab si gaar ah loo soo saaray si loo yareeyo xirashada
5. Ku xirnaanta heerkulka iyo dareemayaasha gariirka si ay ula socdaan shaqada iyo xaaladda - marka la codsado, xogta sidoo kale waxaa loo gudbin karaa meel fog
6. Adeegsiga tikniyoolajiyad casriyeyn casriyeysan (badeecad-saliideysan) oo loogu talagalay nolosha adeegga ee dheeraatay
7. Dahaadh si loo hagaajiyo waxtarka
8. Faa'iidooyinka latalinta farsamada ee bambooyin iyo qalab kale oo wareegaya
9. Keydinta tamarta adoo hagaajinaya waxtarka
10. Yaraynta qiiqa CO2 adoo hagaajinaya nidaamka
11. Badbaadada iyo isku halaynta iyada oo loo marayo kormeerka iyo aqoonsashada waxyaabaha aan waafaqsanayn marxaladda hore
12. Kaydinta kharashyada iyada oo loo marayo nolol adeeg dheer
13. Xal u helida shuruudaha shakhsiga iyo baahiyaha
14. Talo khibrad leh oo ku saleysan aqoonta soo saaraha
15. Macluumaad ku saabsan kordhinta waxtarka tamarta ee nidaamyada.